Ixesha lokuphumla kancane. Unyaka omtsha sisona sihlandlo esihle kakhulu sokuhamba uhambo oluncinane kunye nosapho lwakho, othandekayo okanye intombi. Kukho iindlela ezininzi zokubamba ezi holide, into ephambili ngumnqweno wakho. Ngeengcamango ezilungileyo, unokwenza ngqo ngqo kwintsimi okanye ukuya ehlobo, wenze uhambo olumlingo lwaseYurophu, njl njl.
Emva kokucinga kancinane kule ngxaki, sinikela ngeendlela ezintle zokuzikhethela ukuhamba koNyaka omtsha. Mhlawumbi uthanda into kwaye usenza isigqibo malunga nale adventure. Ngoko uhlale phantsi ngokukhululekile ...
Ubusika? Ngubani owufunayo, sibuyele ehlobo
Ngaba ubusika sele bubuhlungu? Ngaba sinako ukufudumala? Siya apho, apho ilanga, apho ulwandle olufudumele kunye namadoda atshisayo! Unokuya kwi-agarha yokuhamba uze uqhube kwiholide elitshisayo kwindawo enhle nefudumeleyo. Unokuza kunye nesigqeba. Kodwa awuyi kuyenza kuze kube nguNyaka Omtsha. Ngokuqhelekileyo kufuneka ufunde ngaphambili. Ngoko "ukutshisa" iindwendwe yiyona ndlela kuphela.
Ilanga elitshisayo ... Konke into entsha, isele ithatha umoya. Sincoma ukuya e-Abu Dhabi. Njengoko kukhulu ... Kuphumla, kukho ipaki yokuzonwabisa kunye nezikhenkethi ze-chic kunye nepaki yamanzi enhle. Yaye ukuba uthanda ukushayela iimoto ezigqwesileyo, unako ukuya kwiMyuziyam yaseFerrari. Kulapho unako ngokukhululeka ukuba ube ngumdlali we-racer uze ugibele ibhola. Yenza imifanekiso embalwa kwimoto ye-chic.
Iihotele zihlala zibonelela ngenkqubo yokuzonwabisa. Ngoko NgoNyaka Omtsha ungahlala ekhaya. Abathandi bemidlalo enokuzonwabisa banokuthi bahlasele i-mogototravitsya kuma-nightclub kunye namaqela. Kunyaka ngamnye, abatyeleli beza kunye nezinto ezintsha zokuzonwabisa.
Ukuba ufuna ukuhamba ngeempuphu kunye neT-shirt, kodwa ungayithandi ikhephu, ngoko siya e Dubai. Kukho nje indawo enqabileyo yokupaka i-ski resort for tourists. Yinto nje yefayile. Awubonanga oku ngaphambili.
Kufanelekile ukukhumbula! Kulo lizwe awukwazi ukusela utswala ezindleleni. Unako ukusela utywala kuphela kwiindawo zokuzonwabisa. Kubafazi kunye namadoda, iimpahla kufuneka zivaliwe.
Kuyonwaba kakhulu ukugubha uNyaka omtsha eThailand. Le yeholide efanelekileyo kunye nosapho lonke. Abantwana baya kuthanda ukubhiyozela iholide kule ndawo, kuba kukho iinkqubo ezininzi ezinomdla zonyaka omtsha. Uyakwazi ukuhlangabezana namaqhawe okubhala ibali kwaye uchitha ixesha kunye nabo.
Ngelokuthanda, unako ukudibana nemfazwe yama-chimes ekujuleni kolwandle. Ngenxa yoko kuyafaneleka ukudilika ukuya ngasezantsi kweGulf of Thailand. Le Pattaya kwiPhondo leMpuma. Kukho kuhle kakhulu ukuba akunakwenzeka ukuhambisa amagama.
I-Mexico inokumangalisa nayiphi na ityelelo. Unyaka omtsha kweli lizwe, ukuba ungamangaliswa, ngoko nceda uqiniseke ngokuqinisekileyo. Ukubhiyozela uNyaka omtsha elunxwemeni. Yiyiphi oya kukhetha? Kuselwandle lolwandle lwaseMexico okanye eCalifornia, kwaye mhlawumbi iPacific Coast. Ulindelwe umkhosi wokuNyaka omtsha wokuqala. Unokukrapha okanye udibe, mhlawumbi uhambe kwiphathi elwandle. Zama ukutya kwendawo, vela nje iminwe yakho.
Siya kwindaba yamagama
Ngaba uhamba nomntwana wakho uhambo? Ndicinga ukuba angathanda ukubona into enhle kwaye engaqinisekiyo ngoMhla wokuNyaka omtsha. Akunjalo? Sidinga isicatshulwa neSanta Claus okanye iSanta Claus. Siza kulungelelanisa iholide yeholide.
Kwiminyaka emininzi, iDisneyland Paris yenze iiveki zeKrisimesi ngonyaka. Kukho ukuzizonwabisa okuninzi kangaka ezifanelekileyo kubabini nakubantu abadala. Abantwana bakho baya kukwazi ukudibana ne-Santa Claus, baya kubona i-Christmas and even elves in suit suit. Kuza kuba nethuba lokukhwela iindawo ezikhangayo kakhulu, ubone amaqhawe e-fairytale uze ubone imisebenzi. Uza kubona imiqondiso emangalisayo yemikhosi kunye nemiphumo ekhethekileyo. Unokuhlala kwiehotele ezizodwa. Oku kunomdla kakhulu.
USanta Claus ubizwa ngokuba yiYolupukki. Ngoko uye ngqo ngqo kuye eRovaniemi. Nantsi enye yodwa epaki ye-Europetropic yamanzi. Kuyathakazelisa, akunjalo? Ufuna into enomdla?
Masihambe ngehashe, kwidumbu okanye nakwi-dog sledding. Ngaba akumnandi? Oku kuyinyani kwimeko yefayile. Zivale wena u-Snow Maiden kunye ne-Santa elf! Qiniseka ukuba uye ehotele ehotele. Yindawo enhle. Kufuneka ubone oku ngamehlo akho.
Leli lizwe likaBawo uFrost ngokwakhe. Sishiya kwisixeko saseRussia saseVeliky Ustyug. Ukuhlala kweTransfather Frost kuyamangalisa. Apha ungamhlangabeza kwaye uhambe ukusuka ezintabeni. Kukho neembasa zembali. Abantu abadala banikela isiselo sokusela. Isiqalo esihle kuMnyaka omtsha.
Unyaka omtsha kakhulu kubantu abadala
Ndonwabile kakhulu kwaye ndifuna ukuzizonwabisa? Ayanele ngokwaneleyo i-adrenaline? Emva koko uNyaka omtsha kufuneka uthunyelwe kwindawo apho uya kunikwa iholide enkulu. I-Adrenaline iya kunika uvuyo kwaye idibanise ubomi.
Wonke umntu uyazi ukuba lo nyaka yiHhoshe. Ngoko mhlawumbi kulungele ukuba wazi ezi zilwanyana ezikufutshane? U-Eva Wonyaka omtsha kunye nakwezinye iholide kubalulekile ukuba uye kwihhashi yelizwe kunye neqela lezemidlalo, ukwenzela ukuba unokwenza umdla onomdla wokuzonwabisa. Kukho izindlu zokuhlala ezizinzileyo, ezinokuthi uphinde ukhululeke.
Iziseko zibonelelwa ngamahashe ehashe kunye nomfundisi, ukuhamba, ukudlala emoyeni, ukutshatyalaliswa. Ngomnyaka omtsha kukho iinkqubo ezifanelekileyo zeeholide, ezingazange zishiye nabani na abachasayo. Apho ungadibana nabantu abanomdla. Isilwanyana esihlakaniphile singasinika ezininzi iimpawu.
Unyaka omtsha kwi-taiga. Izandi ezinomdla. Inketho efanelekileyo kwiholide ezidlulileyo. Ezi hambo zifanelekile kubantu abane-psyche eqinile. Ndiyathetha ukuba uphume kwi-skis ukusuka kwindawo yokupaka ukuya kwindawo yokupaka. Yidla, kodwa uchithe ubusuku ebusuku. Kwaye malunga nehlathi langaphandle ... Hayi, kuthekani ngawe? Extreme!
Ngaba ungumqhubi we-skiing? Okanye ufuna ngokwenene ukuzama ukukwiqa? Kutheni ungahambi kwindawo yoNyaka kaNtsha. Apho kuya kwenzeka ukuba uhlale ngokukhawuleza kufuphi nomlilo ... Nangona kunjalo. Sidinga kakhulu! Ngoko siya eSweden, eSwitzerland, ePoland, eRomania, eGeorgia, e-Ukraine, eFransi, e-Austria, njl. Ulindele i-adventure.
Ngaba sele uyayazi ukuba uza kuphi uNyaka omtsha? Ngoko kha wuleza, alikho ixesha elisele. Thatha kuphela izinto eziyimfuneko kwaye ujabule. Sinqwenela iholide enyaka. Nomaphi apho, ungabhiyozeli, kuya kuba ngumlingo wobusuku.
Ukuphumla okusebenzayo komhla
Yintoni encedayo kwaye iyathintela ukuphumla kwethu
Indlela yokukhusela ngokukhuselekileyo?
Isimo sezulu eCrimea ngoSeptemba 2016. Ziyintoni iimeko zezulu ezilindelwe eCrimea ngokubhekiselele kwizinto ezibikezelweyo kunye nokuphononongwa kwabakhenkethi?
Iinqununu ezivela kwenyama enqabileyo
Usuku lwe-Radio, ngo-2008
Ukulungisa zonke iingxaki zeengqondo - ngaphakathi kwakho
Inkukhu yenkukhu eLyon
Ziziphi ukutya zokupheka iKrismesi?
Izizathu ezinjalo zokulala ngesondo
I-trailer yefilimu "ama-shade ama-50 e-grey" yakhululwa 2 inxalenye (jonga ividiyo kunye nesithombe)